रोज्नुहोस्ढाँचा - पृष्ठ - स्तम्भहरू ट्याब
रोज्नुहोस्घुसाउनुहोस्/ढाँचा - सेक्सन(हरू) - स्तम्भहरू ट्याब
पृष्ठ, फ्रेम, वा सेक्सनमा तपाईँंले चाहनु भएको स्तम्भहरूको सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्.
तपाईँंले पूर्वपरिभाषित स्तम्भ सजावटहरू पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ
खालीस्थान स्तम्भहरू बराबर
बहु-स्तम्भ सेक्सनहरू मा पाठ समान रूपले वितरण गर्दछ ।
चौडाइ र खाली स्थान
स्वचालित चौडाइमा जाँच बाकस चयन गरियो, स्तम्भहरूका लागि चौडाइ र खाली स्थान विकल्प प्रविष्ट गराउनुहोस्.
स्तम्भ सङ्ख्या प्रदर्शन गर्नुहोस्, एड्जेसेन्ट स्तम्भहरूको चौडाइको साथ साथै दूरी पनि
एक स्तम्भ बायाँमा स्तम्भ प्रदर्शन लैजानुहोस्.
एक स्तम्भ दायाँमा स्तम्भ प्रदर्शन लैजानुहोस्.
स्तम्भको चौडाइ प्रविष्ट गर्नुहोस्.
तपाईँंले स्तम्भहरू बीचमा छोड्न चाहनु भएको खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस्.
समान चौडाइको स्तम्भहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्.
स्तम्भ सजावट पूर्वदृश्यले स्तम्भहरू मात्र देखाउँदछ वरिपरिको पृष्ठ होइन
यो क्षेत्र मात्र उपलब्ध हुन्छ यदि तपाईँंको सजावटले एक भन्दा बढी स्तम्भ समावेश गर्दछ
स्तम्भ बिभाजक पङ्क्तिका लागि ढाँचा शैली चयन गर्नुहोस्. यदि तपाईँं बिभाजक पङ्क्ति चाहनु हुन्न भने, रोज्नुहोस् गर्नुहोस् "None".
स्तम्भ क्षेत्रको उचाइको प्रतिशतको रूपमा बिभाजक पङ्क्तिको लम्बाइ प्रविष्ट गर्नुहोस्.
बिभाजक लाइनको ठाडो पङ्क्तिबद्धता चयन गर्नुहोस्। यो विकल्प यदि लाइनको उचाइ मान १०० % भन्दा कम भएमा मात्र उपलब्ध हुन्छ।
... मा लागू गर्नुहोस््नुहोस्
तपाईँंले स्तम्भ सजावटमा लागू गर्न चाहेको वस्तु चयन गर्नुहोस्। यो विकल्प तपाईँंले यदि संवादलाई ढाँचाबद्ध गर्नुहोस् - स्तम्भहरू रोजेर पहुँच गर्नुभएमा मात्र उपलब्ध हुन्छ।
जटिल पाठ सजावट (CTL) प्रयोग गर्ने एउटा अनुच्छेदका लागि पाठ दिशा निर्दिष्ट गर्नुहोस्। यदि जटिल पाठ सजावट समर्थन सक्रिय पारियो भने मात्र यो विशेषता उपलब्ध हुन्छ ।
Title is: स्तम्भहरू